Somalia:Gacan ku dhiigle lagu toogtay Gobolka Mudug. | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > Galmudug, WARARKA	> Somalia:Gacan ku dhiigle lagu toogtay Gobolka Mudug.
Somalia:Gacan ku dhiigle lagu toogtay Gobolka Mudug.
RM – Maxkamadda darajada 1-aad ee maamulka Galmudug ayaa maanta dil qasaas ah ku fulisay nin shalay ay maxkamaddu ku xakuntay in uu horay dil ugu geystay nin ganacsade ahaa degmada Hobyo ee gobolka Mudug ku ganacsan jiray.
Falkaasi qasaaska ah ayaa waxa uu ka dhacay meel fagaaro ah oo ay ka soo qayb galeen mas’uuliyiin ka socotay maamul Goboleedka Galmudug, culumaa’udiin iyo dadweyne aad u fara badan, waxaana arintaasi gacantiisa ku fuliyay abaaha dhalay ganacsadihii 20-kii bishii la soo dhaafay lagu dilay degmada Hobyo oo lagu magacaabo Cabdi jaamac.
Ninka falkaasi qasaaska lagu fuliyey ayaa lagu magacaabi jiray Maxamed Daahir Maxamed oo ay shalay maxkamadda daraja 1-aad ku riday xakun dil ah kadib markii ay ku caddaatay in uu ganacsadahaasi dilay.
inta badan dadka ku dhaqan deegaannada uu ka taliyo maamulka Galmudug ayaa soo dhaweeyay falkasi qasaaska ah oo ay Maxkamaddu fulisay, taa oo ay u arkaan in ay tahay mid hakin karta dilal soo laablaabta, waxaana xabsiyada maamulkasi ku jira dad lagu soo oogay dambiyo kala duwan oo xakun sugayaal ah.
Dhinaca kale 1,qof ayaa geeriyooday 2-kalena waa ay ku dhaawacmeen markii kooxo hubeysan ay tacshiirad ku fureen gaari mareyey inta u dhexeysa Gelinsoor iyo Galkacyo, kaa oo ka yimid dhanka degmada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan.
Labada ruux ee weerarkasi ku dhaawacantay ayaa la gaarsiiyey isbitaalka koonfurta galkacyo halkaasi oo lagu dabiibayo xaalladdooda caafimaad.
Tags: court, dil, Galmudug, Hobyo, law-crime-and-justice, Muqdisho, SOCIETY, Soomaaliya
Somalia:Askar la xakumay DJibouti:Olole taageero ah oo ka socda Jabuuti